कलाकार भीमबहादुर थापाको निधन
Posted: 2018-06-13 09:45:53
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापाको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। गए राति करिब २ बजे उनको निधन भएको हो। विभिन्न टेलिसिरियल, फिल्मका साथै थापाले रेडियो रुपक तथा नाटकहरुमा पनि काम गरेका थिए। ब्रिटिस सेनामा भर्ना भएर दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका उनी टेलिसिरियल 'देवी' मा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिएका थिए । विश्वयुद्ध सकिएपछि २००२ सालमा नेपाल फर्केका थापा नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।
उनले रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने सैनिक कार्यक्रममा २००८ देखि ०४५ सालसम्म निरन्तर रेडियो रूपक सञ्चालन गरेका थिए।
धिरज र साम्राज्ञीको मस्ती मुड
Posted: 2018-10-15 06:11:36
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ- एजुकेशन एन्ड माइग्रेसन कर्नरले अष्ट्रेलियामा चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को प्रदर्शन गरिरहेको छ । चलचित्रको अष्ट्रेलिया शोमा सहभागी हुन यो चलचित्रका मुख्य कलाकारद्धय नायक धिरज मगर र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अहिले कंगारुको देशमा छन् । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलिया नेपाली चलचित्रका लागि सबैभन्दा राम्रो बजारको रुपमा रहेको छ । ...
लामो समय यौनसम्पर्क नगरे के हुन्छ ?
Posted: 2018-10-13 07:07:17
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- मानव जीवनको चार आधारभूत आवश्यकता मध्ये एउटा हो सहवास । गास, बास र कपासपछि आउने सहवासको महत्व आजभोली झनैं बढेको छ । यसबारेमा के भन्छन डा. राजेन्द्र भद्रा, यौन विनाको जीवन कल्पना गर्न सकिदैन। शारिरीक सम्वन्ध विनाको संसार नै अधुरो जस्तो हुन्छ। लामो समय शाररिक सम्बन्ध नराख्दा यस्ता किसिमका हानी हुन सक्छन् । कामुकतामा कमी- यदि कुनै कारणबस लामो समयसम्म योनसम्पर्क गरिएन भने कामुकतामा कमी आउँछ। यसले कामवासनामा कमी ल्याउँछ। जसले गर्दा यौनसम्पर्कमा सन्तुष्टि र आन्नदको महशुस हुदैन।...
यौन सम्वन्धी अनौठा तथ्यहरु (बृहत्त सर्वेक्षण अनुसार)
Posted: 2018-10-13 07:02:54
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- ड्युरेक्स फेस अफ ग्लोबल सेक्स सर्वेका क्रममा केहि अविश्वसनिय र विचित्र तथ्य वाहिर आएको छ । कुन देशका महिलारपुरुषले कुन उमेरमा आफ्नो कौमार्य भंग गर्छन्, वर्षमा कतिपटक यौन सम्वन्ध राख्छन्, यौन जीवनवाट कति सन्तुष्ट छन् जस्ता यौन प्रवृत्ति सम्वन्धिका यावत विषयमा सर्वेले नयाँ तथ्य उजागर गरेको हो । यसमा २६ देशका २७ हजार भन्दा वढीको सहभागिता थियो ।...
सपनामा सेक्स किन हुन्छ ? यस्ता छन् कारण
Posted: 2018-10-13 06:57:50
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ- निदाएपछि सपना हरेक मानिसले देख्छन् । केही व्यक्तिहरु सपनालाई आफ्नो अवचेतन मनको इच्छाहरुसँग जोड्छन् भने कसैले यसलाई जिन्दगीको कामनाको रुपमा अथ्र्याउँछन् । यहाँ चाहिँ हामी गर्दैछौं सेक्ससम्वन्धी सपनाका कुरा । यस्ता वयस्क मानिसहरु कमै होलान्, जसले सपनामा सेक्स गरेको देख्दैनन् । यस्तोमा कोही चरमोत्कर्ष अगाडि नै निद्राबाट ब्यूँझन्छन् भने कोही स्वप्नदोषको शिकार हुन्छन् । ब्यूँझेपछि उनीहरु खिन्न बन्छन् । यस्ता छन् सपनामा सेक्स गरेको देख्नुको अर्थ र वास्तविकताः ...
Posted: 2018-10-13 06:52:18
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- विवाहपछिको पहिलो रात सुहागरातको वैवाहिक जीवनमा ठूलो महत्त्व हुन्छ । दुई भिन्न भिन्न् परिवेश घर परिवार (कूल), गाउँ, ठाउँ, संस्कार संस्कृतिबाट आएका नव विवाहित जोडीलाई पहिलो पटक सँगै रात बिताउँदा स्वभाविक रुपमा केही असजिलो, अप्ठ्यारो, डर, संकोच पक्कै हुने गर्छ । साथै दुई विपरीत लिंगका जवान जोडीको लागि यो पहिलो अनुभूति हुने हुँदा, सुहागरात उत्सुकता र कौतुहलताले भरिएको पनि हुन्छ ।...